Korea: Fanompoam-pirenena sy fandavana raharaha miaramila · Global Voices teny Malagasy
Korea: Fanompoam-pirenena sy fandavana raharaha miaramila
Voadika ny 07 Aogositra 2008 7:32 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Tsy niverina tany amin'ny vondro-tafika nisy azy ny zatovolahy iray manatontosa ny raharaha miaramilany any amin'ny polisy rehefa avy nahazo fialantsasatra kely ary nanambara ny adin-tsaina mahazo azy (ho fandavana ny raharaha miaramila). Araka ny nolazainy dia mahatsiaro tena ho meloka izy taorian'ny fandravana fihetsiketseham-panoherana iray amin'ny alalan'ny fijoroana an-dalambe mitana labozia. Maro ny namaly ny fanapaha-keviny, izay manipaka goverinemanta sy midika ho tsy fahatontosana ny raharaha miaramila.
Miresaka momba ity lohahevitra ity ny mpiserasera iray.
Zatovolahy iray, Lee Kil Joon, izay nanatontosa ny raharaha miaramilany amin'ny mahapolisy azy ka nomena andraikitra handrava fitokonana omban-dabozia, no nanambara ny ‘fandavany noho ny adin-tsainy’ ary niteraka sahoan-dresaka tokoa fanambarany. Nidekosy nandritra ny alina iray manontolo ary tsy niverina tany amin'ny vondro-tafika nisy azy intsony ingahy polisy Lee Kil Joon voatendry any amin'ny polisy misahana ny fisorohana ny heloka bevava ao Jungrang, Seoul. Nanao valandresaka tao amin'ny Fiangonana Katolika tao Sinwondong, Seoul izy ny takarivan'ny 27 jolay ary nanomboka nifady hanina mandritra ny fotoana tsy fantatra mialoha taorian'ny filazam-pandavana noho ny fisainana sy ho fanoherana ny rafi-pamoretana ampiharin'ny polisy. Hoy izy, “ nandritra ny nanaovako ny asa mahapolisy ahy, dia mahatsiaro aho fa tsy mahazaka ny zavatra ampanaovin'ny lehibenay izay tsy ankasitrahinay” ary “mahatsapa tena aho fa tokony hilaza mazava ny fanoherako ny tsindry mahazo ahy.” […] Ahoana ny hevitrao mpiserasera amin'izao fanoherany hiverina an-daharana izao noho ny raharaha ampiandraiketina azy handrava fihetsiketsehana amin'ny alalan'ny hery izao lazainy fa mifanohitra amin'ny ‘fahafaham-pisainana'?
Maro ny mpiserasera no manohana ny herimpony ary mampivoitra ny toe-draharaha manahirana any amin'ny tontolo miaramila.
Manambara ny fandavana raharaha miaramila i Lee Kil Joon noho ny fandravana ankery ny fanoherana omban-dabozia. Nolazainy fa niady saina izy rehefa nandre ny baikon'ny lehibeny nanao hoe ‘darohy tsy misy anavahana’ ireo mpanohitra mitan-dabozia ireo ary dia midarodaroka sivily fahatany ny polisy. Ary dia nanambara ny fandavana noho ny fisainana izy nony farany. Na izany aza, dia mismisy ny manakiana azy. Misy ny vondrona mitana ny fahazarana milaza azy ho adala. Nahoana izy no manamelotena toy izany? satria “manohitra ny adidin-draharaha miaramila” izy? Te-hanontany ireo vondrona mitana ny fahazarana ireo aho. Sa halany izy satria namoaka ny marina? Noho ny adintsainy amin'ny famoretana ataon'ny miaramila, dia nilaza ny fandavana ny raharaha miaramila izy. Raha toa manko nanaja ny fahafaha-mitokona ny polisy ary tsy mandrava azy ireny amin-kery, dia tsy ho nitranga ny tahaka izao. Na dia eo aza ny fandresen-dahatry ny ray aman-dreniny, ny tiany holazaina dia ny famoretana (amin'ny tsy rariny) ataon'ny polisy amin'ny mpanao fihetsiketsehana. Eritrereto amin'ny saina tsy miangatra anie e. Na dia atao hoe polisy mpandrava fihetsiketsehana aza no ataonao, inona no tsapanao raha maheno baiko avy amin'ny lehibenao ianao manao hoe ‘darohy tsy misy anavana'? Satria manko manao fihetsiketsehana ny sivily dia darohana izay tratran'ny daroka aloha. Inona moa izany fa tsy herisetra? raha lazaina fa ho famerenana ny filaminana sy fampanajana ny lalàna dia tsy rariny ny midaroka sivily. Izay no antony nandraisany ny fanapahan-keviny. Nahoana isika no miantsoantso ny anarany fa tsy mankasitraka ny herim-pony kosa? Ekena tokoa, tsy mety ny tsy mahatontosa hatramin'ny farany ny raharaha miaramila. Nefa, laharam-pahamehana mila fanovana ny olana mety tsy hahavitan'ny polisy ny adidiny.
Araka ny fantatra dia raharaha saropady (mampisy adihevitra) tokoa ny adidy raharaha miaramila any Korea. Tsy vitsy ny mpiserasera no mihevitra fa tsy manohitra ny fanjakana ny nataony fa fidifiana ny raharaha miaramila.
[…] Raha mahita ity vaovao ity ianao dia tahaka ny hoe dia efa inona ery. Nefa raka ny hevitro dia tahaka ny tantarana zaza mihanta tsy te-hanao raharaha miaramila ity. Andeha anie hojerentsika izay nolazainy. “Tena sarotra ho ahy ny hanaiky, tsy maintsy hanaraka ny baiko tsy misy fimonomononana, rehefa tendrena handrava fitokonana aho ary tsy maintsy hizaka ny horakoraka siotsioka avy amin'ny sivily. Tsapako fa levona tanteraka ny mahaolona ahy.” Mahatratra 600 000 amin'izao fotoana izao ny isan'ny zatovolahy mitovy ‘cas’ aminy [miaiina tanteraka ihany koa ny zavatra iainany. Tsy maintsy manoa ny baiko na ho faty na ho velona. Raha toa ka sivily izy dia fantatro fa hiezaka araka izay azony ataony izy hiala amin'ny famaizan'ny vondrona sy fikambanana misy azy. Repobilikan'ny fahafahana sy ny demaokirasia eto, ary anaty fiaraha-monina tokony hanaja ny zon'olombelona isika.Na izany aza, noho ny mahapolisy azy dia tsy manan-jo hilaza ampahibemaso ny heviny izy. Raha zatovolahin'ny repobilikan'i Korea ianao dia tsy maintsy atao io ho adidim-bahoaka. Misy ny baiko syny andraikitra tsy mantsy tandroviinao amin'ny mahapolisy anao. Fa noho ny fitiavantenany dia tsy misy fantany intsony izany rehetra izany. Na dia tsy mitombina aza ny baiko omena anao misy ny vondrona manokana tsy maintsy arahinao. Araka ny tena tiany avoitra dia olona mahafinaritra izy ka tsy ho afaka hanaraka ny baiko tsy mitombina. Raha azo ekena ary izany (fandavana izany), iza no hanao miaramila ary iza no hanaiky hotendrena ho polisy mpandrava rotaka?
Raha mandritra ny ady moa ianao ka maheno ny baikon'ny lehibenao manao hoe ‘andao amin'izay’, no miteny ianao hoe tsy te-hamono olona aho. Dia milaza ny fandavana noho ny adintsaina ianao ary mametrak any fiadianao. Iza no hiaro ny firenenao? Tsy mifanalavitra loatra amin'ny raharahan'ny polisy misoroka ny rotaka izany fanazavana izany. Io no vondrona tsymaintsy manoa ny baiko. Raha tsy manaraka ny baiko ireo, dia izay no fotoana hahapotika tanteraka ny vondrona. Iza moa no hanaiky ny baikon'ny hafa tsy mifanaraka amin'ny eritreriny? Misy ny vondrona tsy manitsy arahinao ny baiko. Na dia hoe tsy rariny aza ny lalàna ary tokony ovaina, tsy tokony ho tahaka izao ataon'ity zatovolahy ity izao no atao.
Noho ny fitiavantenany, inona moa izao no ho eritreretin'ny polisy miray tarika aminy izao… raha efa nanao raharaha miaramila ianao , dia ho fantatrao ny zavatra lazaiko.[…]
Mahavita dingam-piainana iray izany namita raharaha miaramila izany
[…]tena andro mahory sy sarotra ho an'i Lee Kil Joon tokoa matoa nametraka ny fandavana noho ny fisainana izy. However, I beg him to endure a little bit more.[…] Miresaka fiainan'olona iray isika izao. Adintsaina manao ahoana tokoa re izao no mianjady amin'ny ray aman-dreniny? Mieritreritra aho fa ny fomba tsara indrindra tokony ataony dia namoaka ny marinia ary dia mamonjy ny vondro-tafika misy azy.[…] Araka ny efa niainako dia olona tsotra ihany koa ny polisy. Ankoatra ny olona maro izay efa manana safidy politika, maro tamin'izy ireo no tsy nisambotra ny mpanao fihetsiketsehana satria manohana an'i Lee Myung Bak. Izay no asany. Miteny fotsiny, manatanteraka izay baikon'ny lehibe. Ataony izany satria izayno fiainany. Eny fa na eny aza, dia manampotoana betsaka hijerena izy mieritreritra ny amin'ny fiainany. Afaka mahazo namana sy mifandray akaiky amin'ireo izy any.Avereno any amin'ny vondro-tafika misy azy izy! avoty ny ho avin'ny olona iray![…]
Misy ny mandray ity ho fotoana fanararaotra handravana ny polsy misahana ny fisoroahana ny rotaka, izay tena maka maro ny tanora manao raharaha miaramila.
[…] Nahoana izahay no tsy maintsy hiaro an'i Lee Kil Joon
Nandritra ny fihetsiketsehana miaraka amin'ny labozia natao tao amin'ny fiangonana katolika omaly, no nanazavan'ny solontenan'ny antoko Jinbo Vaovao Atoa Lee Duk Woo ny antony hiarovana azy. Ny fitsipika mifehy ny hery vondro-tafika, ny tontolo manodidina sy ny olana mitranga ankehitriny – firenena mandany ny ny tahirin-karena ary mandefa tsy ampieritreretana ny tanora any amin'ny sahan'ady. manohitra ny voasoratry ny lalampanorenana andininy 24-25. Raha lazaina tsotra, miaramila ny polisy misahana ny fisorohana ny rotaka ary tsy misy lalàna mipetraka mamela ny miaramila hifanandrina amin'ny sivily afa-tsy hoe miaina amin'ny lalàna miaramila ny firenena. Sambany tao anatin'ny 17 taona izao no afaka manao fanangona-tsonia isika satria nahazo olona natao ho vavolombelona ho amin'izany. Na izany aza dia tena iankian'ny ain-dehibe ny fanapahan-kevitry Lee Kil Joon. Raha tsy miaraka amintsika izy dia tsy azo atao ny manao fanangonantsonia [sa ametrahana ny fitoriana?]. Tamin'ny 1991 no nisy polisy misahana ny fisoroahana ny rotaka nanao ny fanambarany ny fandavana ny raharaha ary nitaky ny fandravana ny rafitry ny polisy misahana ny rotaka. Sangy nandritra ny goverinemantan'i Roh Tae Woo, dia resy izany noho ny fanapahan-kevitra 5:4. Ankehitriny 17 taona izay no lasa—ataoko fa efa niova ny fahalalana ny momba ny zon'olombelona nandritra izany 17 taona ngarangidina izany—Milaza ny fandavana ny raharaha noho ny fisainana ny olona iray ary afaka manao fanangonantsonia isika. Ity no hany fanararaotra tao anatin'ny 17 taona. Izany no antony tsy maintsy hiarovantsika an'i Lee Kil Joon.[…]
Fantatrao ve? fa raha misy polisy iray tsy mahalala ny baikon'ny lehibeny ka mandao ny tobiny dia mety hahavoasazy 3-10 taona an-tranomaizina izany? Sarotra ny safidim-piainana atrehin'i Lee Kil Joon. Horesen'ny fahavalo lahatra sy ho ampitahoriny izy mandritra ny fotoana hanaovana ny fanangonatsonia [sa ametrahana ny fitoriana?]. Noho io antony io dia maro tamin'ny polisy misahana ny rotaka nanao fanambaram-pandavana raharaha no nijanona antenantenany [tsy nahatozo]. Raha mandritra ny fotoana hanaovana ny fanangonantsonia, no lasa eo ampelatanan'ny ankilany izy, dia tena hanahirana dia hanahirana tokoa ny miandry azy – moa tsy hihoatra noho izay zakan'olona iray va izany?—[…]